Iikhosi zokuqala | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.
Udidi: Iikhosi zokuqala
Isobho lenkukhu kunye neklabishi encinci-ikhosi yokuqala elula kwaye esempilweni
Izitya kunye neklabishi emhlophe emhlophe ayisiyongo nje kuphela, kodwa iphilile. Imifuno ngumthombo weevithamini ezininzi, kunye ne potassium, zinc, magnesium, iron, fluoride.
Isobho se-Cheese kunye neesekhsi kwi-recipe esheshayo
ezaposwa ngomhla 25.06.2019 25.06.2019
Isuphu ekhawulezileyo nenencasa ilungele isidlo sasemini elizweni. Rhoqo kwiholide yehlobo, akukho mnqweno wokuzikhathaza ngokulungiselela izitya ezinzima. Ndingathanda into elula kwaye elula, ngaphandle kokhethekileyo ...
Isobho semifuno kunye ne-millet - yokutya kunye nosana
ezaposwa ngomhla 30.03.2019 30.03.2019
Isuphu emangalisayo kuzo zonke iinkalo. Isondlo, i-fat-fat, ifakwe kakuhle. Kufuneka icinyiwe kwimenyu yabantwana kunye nabantu abadala abamiselwe ukunyanga okanye ukutya ukutya. I-Millet iqulethe ubunzima obukhethekileyo ...
Isobho se-salmon esiswini nesinomdla - isisiphelo esiphezulu!
ezaposwa ngomhla 24.11.2018
Ukufudumeza isuphu yeentlanzi kunokunceda ukomeleza kwaye kukuvuyise ngemini ebandayo. Sinikezela ukuyipheka esiswini se-salmon, iphuma ngokungabizi, kodwa imnandi kakhulu kwaye isempilweni. Izisu zeSalmon, njengazo ...
Ukupheka isobho nge-pasta?
Uyenza njani isuphu yobisi lwe noodles? Okokuqala, i-vermicelli encinci iphekwe kwinani elincinci lamanzi anetyuwa, ke xa sele iphantse yaphekwa kwaye amanzi sele ebile, galela ubisi. Yizisa kwimathumba, kancinci ...
Ngaba ndifuna ukucwina ibhali ngaphambi kokupheka?
Ngaba kufuneka ndigalele irhasi ngaphambi kokupheka amanzi? Ungayiphosa kunye nenyama upheke ixeshana - izakubila.Iresiphi kwiphakheji ilungile ngokuqinisekileyo, kodwa amava abonisa ukuba ...
njani ukupheka isobho seklabishi elimnandi? Iklabishi entsha
Ungayipheka njani isuphu yeklabishi emnandi? Kufuneka upheke inyama, umhluzi. Ukuzonwabisa iiyure ezimbini ubuncinci. Kungcono ukupheka isuphu kwinkukhu okanye kumhluzi wenkomo. Iitapile ...
Ukupheka isobho sangempela saseRussia? Ngaba kukho nahluko phakathi kweRipipe yaseYurophu naseSiberia?
Ungayipheka njani isuphu yokwenyani yeklabishi yaseRussia ngokuchanekileyo? Ngaba ukhona umahluko phakathi kweeresiphi zaseYurophu nezaseSiberia? http://www.sports.ru/tribuna/blogs/utkin/44550.html zama iresiphi evela kuVasya Utkin. Ndiza kubhukisha kwangoko-andiziphekanga (umfazi wam ...
Upheka njani umhluzi wenkukhu omnandi?
Uyenza njani umhluzi wenkukhu omnandi? Ndiza kongeza kongentla. Qiniseka ukuba akukho thumba linogonyamelo, idangatye elincinci kakhulu. Ngaphandle koko umhluzi uya kuba namafu. Beka iiperesi ezimbalwa ezimnyama ...
Kufuneka kubiliswe kangakanani iimfudu, ziqhwa?
Ufanele ukupheka kangakanani iimbaza ezibandayo? - 2 - 3 imizuzu yeembaza eziqhotsiweyo Thatha iimbaza ezihlanjwe ngocoselelo, khama amanzi kuzo kwaye ubeke ipani yokutshisa eshushu efakwe igargarine okanye ioyile yemifuno. ...
Upheka njani isuphu yobisi? Iisobho zilungiswa ngobisi olupheleleyo okanye ngomxube wobisi namanzi. Ungasebenzisa ubisi olunamanzi acocekileyo ngaphandle kweswekile okanye umgubo opheleleyo. Iisobho zobisi ziphekwe nge-pasta ...
Indlela yokupheka isonka esinambithekayo ekhaya?
Ungayipheka njani isuphu yentlanzi emnandi ekhaya? Beka amanzi, wehlise iitapile kwindawo yokubilisa kwaye wongeze ityuwa encinci, njengeetapile zibilise intlanzi enkonkxiweyo kwioyile, uphose itswele kunye netswele elicoliweyo, vumela ...
Ukupheka i-noodle eyenziwe ngamakhaya ngaphandle kwamaqanda
Indlela yokupheka ii-noodle zasekhaya ngaphandle kwamaqanda Thela ii-noodle ezenziwe ekhaya zixhomekeke kwi-100 gram yomgubo kwisitya, yongeza ityuwa, 1 tbsp. l. ioyile yemifuno kwaye uthele nge-3 tbsp. l. amanzi abilayo. ...
Abafazi abanamava banceda! Nceda uchaze ngokucacileyo indlela yokupheka i-pickle nge-pearl nebhali nenkukhu.
Abamkeli ziindwendwe abanamava bayanceda! Nceda uchaze ngokweenkcukacha indlela yokupheka i-pickle ngerhasi kunye nenkukhu Iithegi: isuphu yenyama (31), ukutya kwaseRussia (35), ukhukhamba (3) Zonke iitapile zenziwe ngerhasi. Iresiphi yemifanekiso ...
Yintoni eluncedo kumhluzi wenkukhu?
Ulunge kangakanani umhluzi wenkukhu kuwe? Ewe, ukuba ujonga imeko ngamayeza okubulala inkukhu kwaye unamathele kumhluzi wemifuno kuphela ngokusekwe kwinkxalabo, ke umbuzo uyavela. Kuthekani nge nitrate kwi ...
kwaye ubhale iresiphi ye-pike isobho?
kwaye ubhale iresiphi yesobho seentlanzi zepiki? I-pike perch encinci, intloko ye-anyanisi, i-100 gram yeetamatato ezincinci, i-150 gram yeetapile, i-pepper, ityuwa, imifuno. Chuba i-pike perch ye-intrails kunye nezikali, hlamba kakuhle ...
njani ukupheka isobho?
indlela yokupheka isobho se-anyanisi? kuphela itswele Nqunqa intloko encinci yetswele ngokucokisekileyo uze uyijiye kwioyile yemifuno epanini. Yongeza icephe lomgubo wengqolowa, isinongo kunye netyuwa ukungcamla. Ukuba…
ixesha elingakanani lokupheka inkukhu?
Kuthatha ixesha elingakanani ukupheka inkukhu? Inkukhu iphekwe ngokukhawuleza. Njengoko ibilayo, pheka malunga nemizuzu engama-20 kwaye kulula kakhulu ukujonga ukulungela. Thatha inkukhu ngemela. Ukuba ithambile kwaye akukho ukopha, iyaphekwa. Taki ...
ndixelele iresiphi yesobho kwi-sausage cheese
Ndixelele iresiphi yesosi yesosi yesosiji Kusapho lwam, isuphu enesonka samasi asiyompumelelo, kodwa ndiyithanda kakhulu ngeshizi yesoseji. Ndinika iresiphi njengoko ibiprintiwe kwindawo yokuqala- ...
Ukupheka isobho kwiklabishi entsha?
Ungayipheka njani isuphu yeklabishi kwiklabishi entsha? Hmm, andifumananga iresiphi enye yesiqhelo. Ngaba umntu unokukuxelela inyathelo nenyathelo indlela yokupheka isuphu yeklabishi kwezi zinto zilandelayo: Ikhaphetshu entsha, iitapile, iminqathe, itswele, i-tomato paste, ...
Imibuzo ye-64 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-1,831.